GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian (West) Bislama Bulgarian Cambodian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kannada Korean Lithuanian Malagasy Malayalam Marathi Myanmar Norwegian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Wolaita
“Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya.” (2 Ndị Kọrịnt 9:7) Ọtụtụ nde mmadụ n’ụwa dum maara ihe a e dere n’amaokwu a. Ma, ụfọdụ ndị na-aga chọọchị nwere ike iche na ha kwesịrị inye karịa akpa ha. N’eziokwu, okpukpe ụfọdụ nwere ego ole a kapịrị ọnụ ha na-agwa ndị òtù ha ka ha na-enye. A na-akpọ ya inye otu ụzọ n’ụzọ iri, ya bụ, mmadụ ike ihe ọ na-akpata ụzọ iri ma nye chọọchị otu ụzọ.
Ò nwere ego ole Baịbụl kwuru ka anyị na-enye n’onyinye? E kwuo ya n’ụzọ ọzọ, Ego ole ka m kwesịrị inye n’onyinye?
Onyinye Chineke Gwara Ndị Ya Ka Ha Na-enye n’Oge Ochie na Ndị nke Ha Ji Aka Ha Nye
Na Baịbụl, e nwere ntụziaka doro anya Chineke nyere ụmụ Izrel banyere otú onyinye ọ chọrọ ka ha na-enye ga-aha. (Levitikọs 27:30-32; Ọnụ Ọgụgụ 18:21, 24; Diuterọnọmi 12:4-7, 11, 17, 18; 14:22-27) Ihe ndị a Chineke chọrọ n’aka ha akarịghị ha. Jehova kwere ndị ya nkwa na ọ bụrụ na ha erube isi n’iwu ya, ọ ga-eme ka ihe mba ahụ ‘na-emepụta dị nnọọ ukwuu.’—Diuterọnọmi 28:1, 2, 11, 12.
N’oge ndị ọzọ, ụmụ Izrel nwere ike iji aka ha kpebie ihe ha ga-enye, ma ò buru ibu ma ọ̀ dị ntakịrị. Dị ka ihe atụ, mgbe Eze Devid mere atụmatụ iwuru Jehova ụlọ nsọ, ndị ọ na-achị nyere “ọlaedo ruru puku talent ise” n’onyinye. * (1 Ihe E Mere 29:7) Jiri nke a tụnyere ihe Jizọs hụrụ mgbe ọ nọ n’ụwa. Ọ hụrụ “otu nwaanyị di ya nwụrụ nke dara ogbenye ka ọ tụnyere obere mkpụrụ ego abụọ nke ga-azụtali ihe dị nnọọ nta” n’igbe a na-atụnye ego n’ụlọ nsọ. Onyinye ahụ o nyere ọ̀ pụtara ego ole? Ọ bụ naanị otu ụzọ n’ụzọ iri isii na anọ nke ego a na-arụta n’ọrụ otu ụbọchị. N’agbanyeghị nke ahụ, Jizọs kwuru na Chineke nabatara obere ego ahụ.—Luk 21:1-4.
Ò Nwere Ego Ole A Kapịrị Ọnụ Ndị Kraịst Ga Na-enye?
Ndị Kraịst anọghị n’okpuru ọgbụgba ndụ Iwu ahụ Chineke na Izrel gbara. N’ihi ya, o nweghị ego ole a kapịrị ọnụ ha ga na-enye Chineke. N’agbanyeghị nke ahụ, n’ọgbakọ Ndị Kraịst, inye onyinye na-enye nnọọ ọṅụ. Jizọs Kraịst n’onwe ya kwuru, sị: “A na-enweta obi ụtọ ka ukwuu n’inye ihe karịa ka a na-enweta n’ịnara ihe.”—Ọrụ 20:35.
Ndịàmà Jehova na-enye onyinye afọ ofufo iji na-akwado ọrụ ikwusa ozi ọma ha na-arụ n’ụwa niile. A na-eji onyinye a ebipụta akwụkwọ, dị ka magazin a ị na-agụ, jirikwa ya na-ewu ma na-elekọta ebe ha na-efe ofufe nke a na-akpọ Ụlọ Nzukọ Alaeze. O nweghị ndị a na-eji ego a a na-enweta n’onyinye akwụ ụgwọ ọnwa. A na-enye ụfọdụ ndị wepụtara onwe ha ịrụ ọrụ ime ndị na-eso ụzọ oge niile ego mmachi akpa iji kwụọ ụgwọ ihe ha na-emefu n’ịgba ụgbọ na n’ilekọta onwe ha. Ma, o nweghị onye ọ bụla n’ime ha na-eji aka ya ekwu ka e nyere ya ụdị aka a. N’ezie, ọ dịghị ego a na-enye ihe ka nnọọ ukwuu ná Ndịàmà Jehova iji nyere ha aka n’ọrụ ikwusa ozi ọma ha na-arụ. Kama nke ahụ, ihe ka ukwuu n’ime ha na-arụ ọrụ ego iji na-elekọta onwe ha, dị nnọọ ka Pọl mere mgbe ọ rụrụ ọrụ ịkpa ákwà ụlọikwuu.—2 Ndị Kọrịnt 11:9; 1 Ndị Tesalonaịka 2:9.
Ego ole ka mmadụ kwesịrị inye ma ọ bụrụ na ọ chọrọ inye onyinye iji nye aka n’ọrụ Ndịàmà Jehova na-arụ? Pọl onyeozi dere, sị: “Ka onye ọ bụla nye dị ka o kpebiri n’obi ya, ọ bụghị ná mwute ma ọ bụ ná mmanye, n’ihi na Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya.”—2 Ndị Kọrịnt 8:12; 9:7.
^ par. 7 N’afọ 2008, ihe a na-ere ọlaedo nke dị ihe dị ka gram iri abụọ na asatọ bụ $871, bụ́ nke pụtara na ọnụ ahịa onyinye a bụ ihe dị ka $4,794,855,000.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ego Ole Ka M Kwesịrị Inye n’Onyinye?